Anebon Efa nandroso ny fitaovana mba hanomezana anao ny maro be CNC machining tolotra, anisan'izany ny mihaohao, nitodika, EDM, tariby fanapahana, ambonin'ny-mitoto vary sy ny maro hafa. Mampiasa dehibe 3, 4 sy 5-mpiray CNC machining foibe mba hanolotra anareo marina tsara be, mahagaga manovaova, ary mendrika Output ho an'ny tetikasa efa misy machining. Tsy izahay ihany no milina isan-karazany, fa koa ny ekipana manam-pahaizana manokana, izay manolo-tena hanome anao ny tsara indrindra-in-kilasy fanompoana ao Shina. Ny mahay haihetsika Afaka mampiasa plastika isan-karazany sy ny fitaovana vy hamokatra nihodina ka nijoro faritra.
Tsy marina aminareo fa na inona na inona ny haben'ny ny asa, ny matihanina hitondrana azy io toy ny hoe ny. Afaka ihany koa ny manome tolotra machining CNC nitranga fahiny izay hanampy anao hahazo sary mazava ny vokatra farany.
Anebon no mpitarika eo amin'ny mpanamboatra vokatra vaovao. Specialty Integrated Services dia honed ny fahaizany sy ny dingana. Ny orinasa mamokatra saika izao tontolo izao kilasy rehetra vy singa. Ny injeniera dia miasa aminao mba hahazoana antoka famolavolana toetra ambony indrindra ho an'ny orinasa mpamokatra entana, sy ny fivoriana. Excellent mpanjifa sy fahafaham-po no mampiavaka ny orinasa sy ny fototry ny raharaham-barotra fahombiazana.
Ara-potoana - hahatakatra fa isika faritra sasany ny asa no maika fetra farany, ary manana ny fahaiza-manao sy ny rafitra mba ho azo antoka fa hamonjy ara-potoana nefa tsy nanaiky lembenana ny hatsaran'ny ny asa ataontsika.
Za-draharaha - izahay no manome CNC mihaohao tolotra ho an'ny mihoatra ny 10 taona. Efa nivory isan-karazany ny nandroso mihaohao milina ho an'ny isan-karazany ny dingana sy manana ekipa za-draharaha ny injeniera sy ny mpandraharaha mba hanome vokatra avo lenta ny mpanjifa rehetra.
Fahaiza-manao - Noho ny fahasamihafana ny milina, isika dia afaka manome antoka ny fahamarinan'ny zavatra rehetra amin'ny habe rehetra.
CNC machining dia subtractive orinasa mpamokatra entana, dingana izay tapahiny akora isan-karazany amin'ny alalan'ny fametrahana mazava tsara fanapahana fitaovana. Advanced rindrambaiko no ampiasaina mba hifehy ny fitaovana araka ny fepetra arahana ny famolavolana 3D. Ny ekipa ny injeniera sy Milina fandaharana ny fitaovana mila manatsara manapaka ny fotoana, ary ny farany ambony farany fandeferana hitsena ny fepetra takiana. Mampiasa CNC machining mba tsy mpanamboatra faritra sy ny prototypes, fa koa mba ho fitaovana bobongolo.
Orinasa mpamokatra entana ao amin'ny boky ambany dia mety tsara vahaolana ho an'ny fitantanana ny lisitra sy ny mizaha toetra ny tsena lehibe kokoa alohan'ny mamokatra be. Low-boky mifidy Manufacturing no safidy tsara indrindra.
Anebon dia hisafidy ny fikarakarana ara-dalàna indrindra ny teknolojia, araka ny fanazavana, ny fitsaboana sy ny ivelany dia be. , Fa koa manome ny iray fonosana sy ny hafa-mijanona fanompoana.
Ny CNC Machining, haingana nitranga fahiny sy Low-Boky Faha-Manufacturing Mety amin'ny maro orinasa toy ny Cars, MOTOSIKLETA, milina, fiaramanidina, bala fiaran-dalamby, bisikileta, Watercraft, Electronic sy ny Siansa fitaovana, Laser teatra, Robots, diloilo & Entona Control Systems, Medical fitaovana , faneva mandray fitaovana, Optical fitaovana, Camera & Photo, Sporting fitaovana Beauty, jiro, Furniture nihinana.,
Tombony ny CNC machining
CNC machining dia tsara noho ny isan-karazany ny vokatra ilain'ny fampandrosoana. Ireto ny sasany amin'ireo tombontsoa ny fametrahana mazava tsara machining:
Design Fitsipiky ny:
(1) Ny dingana natao dia azo antoka famaritana ny kalitaon'ny fikarakarana ny milina faritra (na ny fiangonana kalitaon'ny ny milina) ka hihaona amin'ny ara-teknika fepetra voalaza eo amin'ny famolavolana sary.
(2) Ny dingana tokony hanana ambony pamokarana sy ny vokatra dia tokony hatao eny an-tsena haingana araka izay azo atao.
(3) Miezaha mba hampihenana ny vola lany orinasa mpamokatra entana,
(4) Tandremo ny fampihenana ny asa mafy ny mpiasa sy azo antoka ny fiarovana ny vokatra.
Type ny fikarakarana fitaovana
Maro karazana ny fitaovana fanodinana izay azo ampiasaina irery na miaraka amin'ny fitaovana hafa dingana isan-karazany ao amin'ny orinasa mpamokatra entana dingana mba hahatratra ny tiany rafitsary anjara. Ny tena fitaovana fikarakarana Sokajy:
• Hankaleo Tools: Ireo fitaovana ireo fampiasa matetika toy ny vita fitaovana mba hanitarana ny lavaka teo aloha nanapaka tao an-fitaovana.
• Cutting fitaovana FITAOVANA toy ny tsofa sy ny hety no fanapahana solontena fitaovana ho an'ny fitaovana. Izy ireo fampiasa mba hanapaka ny zavatra manana ny habeny efa voafaritra mialoha, toy ny metaly taratasy, ho endrika mahafinaritra.
• atsofony fitaovana: Ireo sokajy ireo dia ahitana ny roa lela swivel izay miteraka lavaka boribory mitovy amin'ny mpiray ny fihodinan'ny.
•-mitoto vary fitaovana: ireo fitaovana mampiasa kodiarana miodina tsara machining na fanapahana kely ny workpiece.
• nijoro fitaovana: nijoro fitaovana mampiasa ny fanapahana miodina ambonin'ny Manisika amin'ny maro mba hamorona ny tsy boribory lavaka, na ny nanapaka endrika tsy manam-paharoa avy amin'ny fitaovana.
• Nitodika fitaovana: ireo fitaovana hanodinana ny workpiece amin'ny lavaka raha ny fanapahana fitaovana mahavita izany.
Carbon Steel, 4140,20 #, 45 #, 4340, Q235, Q345B, sns
SS303, SS304, SS316, SS416 sns
Al6063, AL6082, AL7075, AL6061, AL5052, A380 sns
12L14, 1215, 45 #, A36, 1213, sns
HSn62-1, HSn60-1, HMn58-2, H68, HNi65-5, H90, H80, H68, H59 sns
C11000, C12000, C12000, C26000, C51000 sns
Delrin sy nylon, Teflon, PP, Pei, ABS, PC, PE, POM, Peek.Carbon Fibre
Mechanical tena toetrany Treatment
Sand fanapoahana, Voatifitra vary main'ny rivotra, mitoto vary, Rolling, Nikosokosoka, miborosy, fanafody, Painting, solika Painting etc.
Tena toetrany simika Treatment
Bluing sy mainty, Phosphating, Pickling, Electroless voapetaka amin'ny maro samihafa sy ny Alloys sns Metaly
Electrochemical tena toetrany Treatment
Anodic Oxidation, Electrochemical Nikosokosoka, Electroplating sns
Modern tena toetrany Treatment
CVD, PVD, Ion implantation, Ion voapetaka, Laser tena toetrany fitsaboana ect.
Dry Sand vary main'ny rivotra, mando Sand vary main'ny rivotra, Atomized Sand vary main'ny rivotra sns
Electrostatic fanafody, Fame fanafody, Powder fanafody, Plastic fanafody, fanafody betsaka ao amin'ny plasma
Copper voapetaka, chrome voapetaka, Zinc voapetaka, Nickel voapetaka
aluminium maty mandatsaka faritra , aluminium maty fanariana , nanarato teny amin'ny faritra , maty fanariana faritra , aluminium maty niampatra, aluminium fanariana,